प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाउने शुत्र
मानिसहरूलाई आकर्षक र प्रभावशाली लाग्ने व्यक्तित्वको नाम सोधे, उनीहरूले दिने उत्तर पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ। अमेरिकन समाजमा “शेकन” मार्टिनी मनपराउने काल्पनिक जासूस जेम्स बोन्ड, चर्चित टेलिभिजनकर्मी ओप्राह विन्फ्रे वा पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन्।
ऐतिहासिक व्यक्तित्वको नाम पनि आउनसक्छस् जस्तै डा. मार्टिन लुथर किङ वा महात्मा गान्धी। तर उनीहरूको व्यक्तित्व प्रभावशाली हुनुको कारणबारे सोधे उत्तर पाउन गाह्रो छ।
तुलनात्मक रूपले हामी केहि मानिससँग बढि आकर्षित हुन्छौं। तर हामीलाई उनीहरू किन मनपर्छ भनेर कारण पत्ता लगाउनु सजिलो हुँदैन।
प्राचीन ग्रीकवासी प्रभावशाली व्यक्तित्वलाई भगवानको उपहार मान्थे। यस्तो विशेषता केहिले मात्र पाउँछन् भन्‍ने ठान्थे। तर वास्तवमा यो सिकाइ हो। हिँड्न वा नयाँ भाषा सिक्दा अभ्यास गरिने शब्दावलीजस्तै यो पनि एउटा सीप हो जसलाई विकास गर्न सकिन्छ। सम्पत्ति वा आवरणले पनि कोहि मनपर्नु वा नपर्नुमा भूमिका खेल्छ तर दुवै नभई जन्मिदाँ पनि प्रभावशाली होइन्न भन्ने बुझाइ गलत हो।
प्रभावशाली व्यक्तित्वबारे युगौंदेखि प्लेटोजस्ता दार्शनिकहरुले अध्ययन गरे पनि धेरै कुरा जान्न बाँकी छ। यद्यपि दुई सत्यमा कुनै विवाद छैन।
पहिलो, हामी विशेष गरि मनपर्ने केहि व्यक्तिसँग अलौकिक रूपले आकर्षित हुन्छौं। तर यस्तो सधैं हुँदैन। कुनै प्रतिभाशाली “भिलेन” सँग पनि हामी सहजै आकर्षित हुनसक्छौं।
दोश्रो, यी व्यक्तिहरू किन यति बिघ्न आकर्षक हुन्छन् भनेर हामी सुइँकोसम्म पाउँदैनौं। मीठो मुस्कान वा राम्रो कथा सुनाउने क्षमताजस्तो सतही कथाबाहेक केहिले मात्रै उनीहरू आकर्षक हुनुको कारण तत्कालै भन्न सक्छन्।
सायद यो उद्विकासको कुरा हो। जन्मजात आउने स्वभाविक भावनाहरूले सिर्जना गर्ने विभिन्न कुरालाई हामी “गट फिलिङ” भन्छौं। खासमा यी भावनाहरू अरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दा हामीले थाहा नपाइ प्रशोधन गर्ने दर्जनौं वा सम्भवत सयौं मौखिक वा गैरमौखिक सङ्केतको अवचेतना प्रतिक्रिया हो। यो आवश्यक सीप पनि हो। यसले सबै स्तनधारीलाई शारिरीक हाउभाउ, बोलीको गति र सूक्ष्म गतिविधीको निरन्तर लेखाजोखा गरेर अन्यको नियत मापन गर्न सहयोग गर्दछ। खतराको सङ्केत पनि गर्नसक्छ।
स्विट्जरल्यान्डको युनिभर्सिटी अफ लोसानमा संस्थागत व्यवहारका प्राध्यापक जोन एन्टोनाकिसले चमत्कारी व्यक्तित्व सूचनाको सङ्केतन हुने बताए। “सामान्य अर्थमा साङ्केतिक, भावनात्मक र मुल्यवान तरिकामा सूचना सङ्केतन गर्नु नै प्रभावशाली व्यक्तित्व हो। त्यसैले मौखिक र गैरमौखिक विधि प्रयोग गर्नु नै प्रतिभाशाली सङ्केतन हो।”
तुलनाका लागि, डा. एन्टोनाकिसको व्याख्या “लड वा भाग” प्रतिक्रियाको साधारण संस्करण हो। भाग्नुभन्दा हाम्रो ध्यान खोजिरहेको व्यक्ति त्यसको योग्य भए नभएको सम्बन्धमा हामी निरन्तर सूक्ष्म निर्णय गरिरहेका हुन्छौं।
“करिज्मा” प्रशिक्षक र “द करिज्मा मिथ” की लेखक ओलिभिया फक्स यो “करिज्म्याटिक” व्यवहारलाई तीन स्तम्भमा बाँड्न सकिने बताउँछिन् ।
पहिलो, उपस्थिती। कसैसँग कुरा गर्दा ध्यान अन्यत्रै गएको अनुभव भए, आफूलाई केन्द्रित गर्दै “रिफोकस” गर्नुहोस्। वातावरणको ध्वनि र तपाईंको सासलाई ध्यान दिनुहोस्। खुट्टाको बुढी औंलामा सुरू हुने र शरिरभरि फैलिने सूक्ष्म संवदेनाहरूलाई ध्यान दिनुहोस्।
दोश्रो, शक्ति। उच्च हैसियत प्राप्त गर्नुभन्दा स्वयंले सिर्जना गरेको बाधाहरू फूटाउनुपर्छ। अगाडि नै हासिल गरेको सफलतासँगै आउने लाञ्छना हटाउनु यसको अर्थ हो। “इम्पोस्टर सिन्ड्रोम” भएकालाई आफू भएको स्थानमा बस्न योग्य नभएको डर हुन्छ। जति उकालो चढिन्छ यस्तो अनुभव त्यति नै बढि आउँछ।
स्वयंलाई शंका गर्न छोड्नुपर्छ। आफ्नो सीप र चाहनाहरू अरूका लागि मुल्यवान र रोचक लाग्छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ। आफू योग्य भएको ढाडस दिनुपर्छ। तर यसो गर्न सजिलो पक्कै छैन।
तेश्रो, न्यानोपन। यसको नाटक गर्नु अलि कठिन छ। यसका लागि व्यक्तिले दया र स्वीकृति सङ्केत गर्ने भावना प्रसार गर्नुपर्छ। नजिकका आफन्त वा मित्रबाट यस्तो भावना प्राप्त हुनसक्छ। यसमा विशेषज्ञता हासिल गरेकाहरू चाहे भर्खरै भेटिएका व्यक्ति नै किन नहुन्, उनीहरूलाई पनि यस्तो भावना जगाउन सक्छन्।
यसमा विशेषज्ञता हासिल गर्न आफूले न्यानो र प्रेम अनुभव गर्ने व्यक्तिको कल्पना र साझा अन्तर्क्रियामा आफूलाई सबैभन्दा रमाइलो लाग्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्न फक्सको सुझाव छ। अन्तर्क्रियाअघि तपाईं यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। नभए कसैले बोलेको सुनिरहँदा पनि यस्तो गर्न सकिन्छ। यसले केहि सेकेन्डमै शरिरको हाउभाउ परिवर्तन गर्ने र सबैभन्दा अन्तर्मुखि स्वभावका व्यक्ति पनि प्रभावशाली व्यक्तित्वझैं व्यवहार गर्न सक्ने डा. फक्सको कथन छ।
माथि उल्लिखित तीन स्तम्भमा फर्किदाँ तपाईंले व्यक्तिगत रूपमा चिनेका सबैभन्दा प्रभावशाली व्यक्तित्वले सामान्तया एक वा दुई विशेषतामा मात्रै उच्च स्तरको सफलता हासिल गरेका छन्। दुर्लभ एकाधले मात्रै सबै तीनवटैमा दक्षता हासिल गरेका हुन्छन्।
उदाहरणका लागि डा. किङसँग सबै विशेषता थिए। उनलाई डा. फक्सले “भिजनरी करिज्मा” वर्गीकरण गर्छन्। उनी वरियताको शीर्ष स्थानमा भए यहाँ उल्लेख गरिने अन्य तीनलाई मध्यम वरियतामा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ।
एप्पलका सहसंस्थापक स्टिभ जब्सको शक्ति र उपस्थिती उत्कृष्ट थियो। तर सन् २०१८ मा प्रकाशित छोरी लिसा ब्रेन्नान जब्सको “स्मल फ्राइ” नामक संस्मरणमा बुवा जब्ससँग न्यानोपनको अभाव भएको उल्लेख छ। अमेरिकन मोटर कम्पनी टेस्लाका कार्यकारी प्रमुख इलोन मस्कसँग पनि न्यानोपनको अभाव छ। उनी उपस्थिती र शक्तिमा औसतभन्दा निकै माथि छन्। जब्सलाई “अथोरिटी करिज्मा” र मस्कलाई “फोकस करिज्मा” भनेर डा. फक्सले वर्गीकरण गरेकी छिन्।
एचबिओको चर्चित श्रृङ्खला “गेम अफ थ्रोन्स” की अभिनेत्री एमिलिया क्लार्कलाई “काइन्डनेस करिज्मा” वर्गीकरण गरिएको छ। उनीहरूमा न्यानोपन धेरै हुन्छ। तर उपस्थिती धेरै भए पनि शक्ति न्युन हुन्छ।
तपाईं आफूलाई अरूको प्रिय बनाउन चाहनुहुन्छ भने डा. एन्टोनाकिस “स्टोरीटेलिङ” गर्न सुझाव दिन्छिन्।
लाक्षणिक रूपमा बोल्नेहरू नै सबैभन्दा प्रभावशाली हुने उनले बताए। उनीहरू किस्सा र तुलनाको प्रयोग गरेर संवादलाई अर्थपूर्ण बनाउन सक्छन्। उनीहरू घटनाको संस्मरण सुनाउँदैनन्। बरू अनुहारको भाव, उर्जाशील शारीरिक भाषा र स्वरको उतारचढाव प्रयोग गरेर मुख्य बुँदाहरू प्रस्तुत गर्छन्। नैतिक विश्वास र सामुहिक भावनाको सार प्रयोग गर्न उनीहरू सिपालु हुन्छन्।
मानिसहरूको ध्यानाकर्षण गर्न खप्पिस हुन्छन्। छोटोमा एउटा राम्रो कथा सुनाउनुहोस्। प्रायस् प्रभावशाली व्यक्तिले नै सबैभन्दा प्रभावकारी भाषण गर्न सक्छन्।
तर प्रभावशाली व्यक्तित्व परिष्कृत र अरूको ध्यान तान्नसक्ने वक्ताभन्दा परको विषय हो। राम्रो कथा सुनाउन सक्ने भएकाले मात्रै उनीहरूलाई मनपराइएको होइन। अरूलाई गर्ने व्यवहारका कारण पनि उनीहरू आकर्षक बनेका हुन्। हँसिमजाक गर्छन् र ध्यान भंग हुन दिदैनन्। उनीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दा समय रोकिएजस्तो र आफू नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भएको अनुभव हुन्छ। उनीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने मानिसलाई आनन्द लाग्छ। यसले भावी अन्तर्क्रियाको सम्भावना पनि बढ्छ।
आकर्षक बन्ने सबैभन्दा छिटो तरिका नै अभ्यास हो र यो घरमा सुरू हुन्छ। स्वयंलाई शङ्का गर्ने बानी हटाउनुहोस्। अन्यसँगको संवाद र अन्तर्क्रियामा सक्रिय सहभागी हुन ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्।
त्यसपछि सामाजिक भेलामा सहभागी हुन र मन्तव्य दिन सजिलो अनुभव हुँदै जानेछ। कमजोरी लुकाउँदै आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने अवसर सिर्जना हुनेछ। प्रत्येक अन्तर्क्रियाले अभ्यास गर्ने, अध्ययन गर्ने र नयाँ रणनीति लागु गर्ने अवसर प्रदान गर्छ।
Published Date: Monday, 19th August 06:53:05 AM